November 2018 - Page 3 of 6 - Puntland Mirror Believable Media Website
Madaxweyne Farmaajo oo u safray dalka Talyaaniga
November 19, 2018 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta oo Isniin ah u safray dalka Talyaaniga kadib martiqaad uu ka helay dowladda Talyaaniga, sida lagu sheegay war-saxaafadeed kasoo baxay madaxtooyada. Madaxweyne Farmaajo iyo […]
Puntland oo markale xabsiga ka sii deysay Caloolgeel oo ku xukunaa dil toogasho ah
November 18, 2018 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Puntland ayaa xabsiga ka sii deysay Cabdirisaaq Xuseen Tahliil oo loo yaqaan Coloolgeel, taasoo noqoneysa markii labaad oo xabsiga laga sii daayo tan iyo sanadkii 2014-kii. Siidayntiisa ayaa timid kadib wadaxaajood dhexmaray madaxda […]
November 17, 2018 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa kala diray golihii deegaanka magaalada Gaalkacyo, sida lagu sheegay digreeto kasoo baxday xafiiska madaxtooyada maanta oo Sabti ah. Digreetada ayaa lagu sheegay in golaha deegaanka ay hanan-waayeen […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Puntland ayaa ah meesha ugu weyn ee hubka sharci darada ah uu ka galo Soomaaliya, sida ay warbixin ku sheegeen kooxda dabagalka Qaramada Midoobay ee Soomaaliya iyo Eriteeriya. Warbixinta oo bishaan Novermber 7-dii […]
Garowe-(Puntland Mirror) Puntland is the main entry point for illegal arms into Somalia, UN Monitoring Group on Somalia and Eritrea said in a report. In the report released on November 7, the monitors said prominent […]
November 16, 2018 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Al-Shabaab ayaa si wada in ay dakhli weyn ka hesho dhuxusha laga dhoofiyo koonfurta Soomaaliya inkasta oo Midowga Afrika ay saldhigyo ciidan ku leeyihiin meelaha laga dhoofiyo, sida lagu sheegay warbixin ay asbuucaan […]
November 14, 2018 Puntland Mirror 0
Boosaaso-(Puntland Mirror) Askari katirsan ciidamada Puntland ayaa labo askari oo kale ku dilay magaalada Boosaaso, sida ilo-wareedyo katirsan haayadaha ammaanka ay u sheegeen warsidaha Puntland Mirror. Dhacdada ayaa timid kadib markii ay kaftameen balse askariga […]
Boosaaso-(Puntland Mirror) Maxkamada ciidamada Puntland ayaa dil toogasho ah ku xukuntay Cabdirisaaq Xuseen Tahliil oo loo yaqaan Caloolgeel, sida uu laanta Af-Soomaaliga ee VOA u sheegay guddoomiyaha maxkamada ciidamada Cawil Axmed Faarax. Caloolgeel ayaa lagu […]
November 13, 2018 Puntland Mirror 0
Kismaayo-(Puntland Mirror) Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe ku dilay xubin katirsan oo ajnabi ah, sida wararku sheegayaan. Macluumaad ay warbaahintu ka heleen deegaankaas ayaa sheegaya in khilaaf uu ka dhex dhashay […]
November 12, 2018 Puntland Mirror 0
Nairobi-(Puntland Mirror) Diyaaradda Kenya Airways ayaa duulimaadyo toos ah ka bilaabi doonta Nairobi iyo Muqdisho Khamiista. Diyaaradda ayaa la filayaa in todobo jeer asbuucii oo duulimaadyo ay ka sameyso labada magaalo, sida maamulaha Kenya Airways […]